Football Khabar » मेस्सी घाइते भएको क्लबद्वारा पुष्टि : कति समय मैदानबाहिर ?
मेस्सी घाइते भएको क्लबद्वारा पुष्टि : कति समय मैदानबाहिर ?
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका कप्तान तथा प्रमुख खेलाडी लिओनल मेस्सी घाइते भएका छन् । क्लब बार्सिलोनाले यसको अफिसियल पुष्टि गरेको छ । यससँगै मेस्सीले क्रिसमस पर्वपछिको पहिलो खेल गुमाउने भएका छन् । बार्सिलोनाले मंगलबार राति ला लिगामा आफ्नो घरेलु मैदानमा एइबारसँग खेल्दै छ । सो खेल बार्सिलोनाका लागि वर्ष २०२० को अन्तिम खेल हुनेछ ।
बार्सिलोनाका अनुसार मेस्सीको दायाँ खुट्टाको जोर्नीमा चोट परेको छ । र, उनको आज (आइतबार) उपचार पनि पूरा भइसकेको छ । तर, उनलाई फिट भएर मैदान फर्किन एक साता लाग्नेछ । बार्सिलोनाले यो बताएको छ कि, मेस्सीले आगामी खेल गुमाएपछि त्यसपछिको खेलबाट टोलीमा फर्किने सम्भावना छ ।
यससँगै मेस्सी अब अर्को वर्ष २०२१ को पहिलो खेलबाट मात्रै मैदान फर्किनेछन् । जनवरी ३ तारिखमा बार्सिलोनाले अवे मैदानमा हुएस्कासँग खेल्दै छ । मेस्सी सो खेलबाट टोलीमा फर्किनेछन् । बार्सिलोना हाल ला लिगामा १४ खेलपछि २४ अंक बनाएर पाँचौं स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति १२ पुष २०७७, आईतवार २२:३०